US Protagonists event: High Jewellery Talents Revealed - HIGH JEWELLERY DREAM
ဘ‌‌လော့ခ် Bonhams ခေတ်ပြိုင်အပိုင်းပိုင်း ဖြစ်ရပ်များ အမြင့်ရတနာ အထင်ကရ စိတ်ဝင်စားခြင်း Savoir-Faire အဆိုပါမီးမောင်းထိုးပြအောက်မှာ
US Protagonists event - ရတနာများအသည်းအသန်မြင့်တက်လာခြင်း
ရတနာရှစ် 'ဇာတ်ကောင်များ' သည်သူတို့၏အနုပညာပါရမီကိုမြင့်မားသောရတနာများဖြင့်ပြသသည်
ဇန်နဝါရီလ 24, 2016
အမေရိကန်ဇာတ်ကောင်- အမေရိကန်မှအကောင်းဆုံးခေတ်ပြိုင်လက်ဝတ်ရတနာဒီဇိုင်နာများရွေးချယ်ခြင်းကိုပြသထားသောသီးသန့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု Vogue Gioiello အတူ ပူးပေါင်း. Bonhams'' နိုင်ငံတကာရတနာဌာန။ ထူထောင်နှင့်ပေါ်ထွက်လာနှစ် ဦး စလုံးအခွက်များအတွက်အမေရိကန်ဒီဇိုင်းပါရမီအပေါ်တစ် ဦး ကတစေ့တစောင်း
နောက်ခံအမျိုးမျိုးမှ (, ည့်သည် ၃၀၀ ကျော်) (မီဒီယာ၊ ကုန်သည်များ၊ စုဆောင်းနှင့်ငါကဲ့သို့သောဘလော့ဂါများသည်ယနေ့ရတနာအနုပညာနှင့်လက်မှုပညာ၏ထူးချွန်မှုကိုကိုယ်စားပြုသောဤထူးချွန်သောစွမ်းရည်ရှစ်ခုကိုလေးစားရန်အတွက်ကော့တေးလ် reception ည့်ခံပွဲအတွက် Bonhams တွင်စုရုံးခဲ့ကြသည်။
ထိုလှုံ့ဆော်မှုကိုခံစားရရန်တစ်ညဥ့်တစ်ခုလုံးကိုအသိပေးသည့်အနုပညာလက်ရာများကို ဖန်တီး၍ အသက်သွင်းပါ။ ဒီမှာ ဗီဒီယို Vogue Gioiello မှထုတ်ပြန်သည် CNLive.it ညနေခင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စွမ်းအင်ကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီးဒီနေရာမှာဒီအနုပညာရှင်တွေအကြားမှာကျွန်တော့်ကိုအထူးသဖြင့်ဂုဏ်ပြုခံရတာကိုဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
Bonhams ရှိ USA ရတနာဒါရိုက်တာ Susan Abele ၏စကားများမှာ -
"ဒီ ၂၁ ရာစုရဲ့ရတနာတွေပါ" ဟုသူမကဆိုသည်။ “ သူတို့နဲ့တွေ့ဖို့၊ သူတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကြားဖို့၊ လှုံ့ဆော်မှုကိုရှာဖို့၊ လက်ဝတ်ရတနာတွေနဲ့ထိဖို့ဆိုတာမင်းရဲ့တာ ၀ န်ပဲ။ အနုပညာရှင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုနားလည်ဖို့ .... သင်ကြိုက်သည့်အရာကိုရွေးပါ။ အရသာတိုင်း၊ လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိတယ်။
ရှစ်ယောက် အခွက် ခဲ့ကြသည်: အဲလက်စ်စစ်သား, အလက်ဇန္ဒရ Mor, Heidi Gardner NYC, မင်္ဂလာပါ, K. Brunini ရတနာ, Suzanne Kalan, Sylva & Cie နှင့် ဘုရားကျောင်းစိန့် Clair.
အဲလက်စ်စစ်သား, ကိုယ်တိုင်သင်ကြားသောရတနာနှင့်ယခင်အင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး သည်သူ၏အလုပ်အတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုကိုအသုံးချပြီး၎င်းသည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အလွန်သေးငယ်သောကျောက်မျက်ရတနာများတွင်အလွန်သေးငယ်သောပန်းပုရုပ်ပုံများကိုအထူးဂရုပြုစေသည်။
သူသည်သတ္တုထွင်းခြင်းစွမ်းရည်၊ တီထွင်မှု၏ကိရိယာများနှင့်နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုထည်နှင့်တူအောင်ပြုလုပ်ရန်ကျော်ကြားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာတွေ့ရှိချက်မှာကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အရသာနှင့်ဝေးကွာသော်လည်း၎င်းသည်အများအပြားနှင့်မကြာခဏရွေ့လျားနေသောအစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောထူးခြားသောပန်းပုလက်ရာများကိုဖန်တီးနိုင်ခြင်း၊ သင်နှင့်အနက်ဖွင့်ရန်နှင့်သင့်အားဆုံးဖြတ်ရန်ရှုပ်ထွေးသောကမ္ဘာကြီးကိုဖန်တီးရန်အတော်အသင့်ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသဘာဝကမ္ဘာမှပုံစံပြုပုံစံများနှင့်ဒြပ်စင်များ - အားလုံးသည် Mr Soldier ၏စိတ်ကူးယဉ်စကြဝuniverseာကိုတည်ဆောက်သည်။
၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် Alex Soldier သည်ရုရှားကမ္ဘာ့ပြခန်းမှ ၂၀ ရာစု၏အကြီးမားဆုံးဆဲလ်ဖုန်းများနှင့်သရုပ်ဆောင်များအတွက် Mstislav L. Rostropovich အားအထူးလက်ဆောင်တစ်ခုဖန်တီးရန်တာ ၀ န်ပေးခဲ့သည်။ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ စိန်များနှင့်ပုလဲများပါဝင်သည့်ရွှေနှင့်ပလက်တီနမ် ၃၅ ပိုင်းခွဲခြားထားသည်။ ဖယ်ရှားနိုင်သောပတ္တမြားလက်စွပ်သည် ၃၅ ခုမြောက်အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်မာစတာလက်ရာကိုပြီးဆုံးစေသည်။
အဲလက်စ်စစ်သား၏ Haute Couture ဖန်တီးမှု
US Protagonists မှ Alex Soldier Bonhams ၏ပုံရိပ်ယဉ်ကျေး။
အလက်ဇန္ဒရ Mor ဤအနုပညာရှင်ရှစ်ယောက်အကြားတွင်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးရတနာဒီဇိုင်နာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ငါသူမ၏ဖန်တီးမှုကိုသာခံစားသည်။ ၎င်းသည်နည်းပညာများ၊ ကျောက်မျက်ရတနာများ၊
သူမရဲ့ရတနာတွေကိုကျွန်တော်အထူးကြိုက်နှစ်သက်သည်မှာသူတို့ရဲ့ကြေငြာချက်တွေအမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့သည်အမြဲတမ်းကောင်းမွန်သောလှပမှုနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ထို့အပြင်မစ္စ Mor ၏ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်သည်သူမ၏အပိုင်းအစများတွင်ထင်ရှားစွာရှိနေပြီး၎င်းသည်အမှန်တကယ်ပင်ထူးခြား။ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများပြည့်နှက်နေသည်။
US Protagonists မှ Alexandra Mor ။ Bonhams ၏ပုံရိပ်ယဉ်ကျေး။
ထိပ်တန်း Andean Blue Opal နှင့် Diamond Ring လက်ဇန်းဒါး Mor သည် US Protagonists တွင် ၀ တ်ဆင်ခဲ့သည်။
အလက်ဇန်းဒါး Mor's Feather လက်စွပ်တွင်အနုပညာရှင်၏လက်မှတ်မှရေပေါ်စိန်ခြယ်မှုန့်နှင့်ဓားအစွန်းအကွက်များဖြင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့်ခေါင်မိုး - ဖြတ်တောက်ထားသောတောက်ပသောစိန်စင်ကျောက်ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ပုံထဲမှာပလက်တီနမ် setting ကို။ ၂၅။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် (c) Jewellerytroughtime.com
Alexandra Mor ၏ Star Rose Quartz Cabochon စိန်လက်စွပ်တွင် ၅၁.၀၃ ကာရက်ရှိရှားပါးသောအရာတစ်ခုပါဝင်သော rose quartz cabochon ။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် (ဂ) Jewellerytroughtime.com
Alexandra Mor ၏စိန်နှင့် Opal Cabochon Curved Cuff လက်ကောက်၊ စိန် ၁၀.၂၁ ကာရက်နှင့်စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၁.၄၉ ကာရက်ရှိ cabochon opal ၁၆ ခုပါရှိသည်။ ပလက်တီနမ်နှင့်အဝါရောင်ရွှေ။ အဲ့ဒိထဲကမှတစ်ခု။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် (ဂ) Jewellerytroughtime.com
ဟိုင်ဒီ Gardner သူမ၏အလုပ်ကို“ နူးညံ့သိမ်မွေ့။ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း” နှင့်အကြောင်းကောင်းရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သူမ၏ကိုယ်ပိုင်စကားဖြင့်:
“ ကျွန်တော့်ရဲ့ဖန်တီးမှုတစ်ခုစီမှာကိုယ်ပိုင်အတ္ထုပ္ပတ္တိတွေရှိတယ်။ အချစ်၊ ဝမ်းနည်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ဟာသကိုဖော်ပြတဲ့နောက်ခံသမိုင်းရှိတယ်။ ဒါဟာသတ္တဝါတစ် ဦး ၏စိတ်ကူးနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ လူတွေကကျွန်တော့်သတ္တဝါတွေနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ချင်တယ်။ ဒီသတ္တဝါတွေကသူတို့လိုအပ်တဲ့အခါခွန်အား၊ နှစ်သိမ့်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးတယ်။ ”
ဟိုင်ဒီဂတ်နာသည်သူမ၏တီထွင်မှုများကို US Protagonists တွင်ပြသခဲ့သည်။ Bonhams ၏ပုံရိပ်ယဉ်ကျေး။
အမေရိကန်ဇာတ်ကောင်များမှ Heidi Gardner ၏ရတနာ။ Bonhams ၏ပုံရိပ်ယဉ်ကျေး။
မင်္ဂလာပါအခြားကိုယ်ပိုင်လေ့လာသင်ကြားသည့်ဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည့် Robert Keith သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖက်ရှင် - လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဇိမ်ခံပစ္စည်းရတနာများကိုအထူးပြုသည်။ ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏သုံးကွင်းဆက်ကွင်းဆက်များနှင့်ကျော်ကြားသူများစွာနှင့်လက်တွဲလုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်လူသိများသည်။
Katey Brunini of K. Brunini ရတနာ သူမအနေဖြင့်မည်သည့်အခါမျှလက်ဝတ်ရတနာနှင့် တွဲဖက်၍ မရနိုင်သောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည်။ သူမကပွဲ၌သူမဝတ်ဆင်ထားသောကြီးမား။ နို့ရည်ဖြူပန်းထိုးဆေးထိုးသည့်နွားမအရိုးများဖြစ်သည်။
အလွှာစုံသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖြစ်သောကာတီဘရူနီနီသည်သူမ၏အပိုင်းအစများကိုသူမ၏ခရီးသွားအတွေ့အကြုံများ၊ ဝိညာဉ်ရေးအခိုက်အတန့်များနှင့်သူမသဘာဝတရားတွင်တွေ့မြင်ရသည့်လှုံ့ဆော်မှုများဖြင့်ထိုးထွင်းထားသည်။ မစ္စဘရူနီနီနှင့်အတူစရိုက်လက္ခဏာများသည်ခေတ်မီလှပမှုနှင့်အဖိုးတန်မှုကိုရရှိသည်။ ကျောက်မျက်ရတနာများ၊ သစ်သားများနှင့်အရိုးများနှင့်အတူတကွချိတ်ဆက်ထားသောအဖိုးတန်သတ္တုများသည်စီစီလီယန်၏ရွှေပန်းထိမ်ခြင်းနှင့်ကျွန်း၏ကြမ်းတမ်းသောရှုခင်းများ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်။
Us Protagonists မှ Katey Brunini ။ Bonhams ၏ပုံရိပ်ယဉ်ကျေး။
ဘရူနီနီ၏ရတနာများကိုအမေရိကန်ဇာတ်ကောင်များထံမှကြိုးစားနေသူတစ် ဦး ။ Bonhams ၏ပုံရိပ်ယဉ်ကျေး။
စစ်မှန်တဲ့မျက်စိ Sylva & Cieတီထွင်ဖန်တီးမှုများသည်သူတို့ရဲ့စပျစ်သီးအစိမ်းရောင် (ad hoc သတ္တုစပ်များ၊ နူးညံ့သောစိန်များနှင့် Sylvia ကိုယ်တိုင်စုဆောင်းနေသည့်တူညီသောအရာများ၏တည်ရှိမှုကိုတွေ့ရှိခြင်း) ကိုအောင်မြင်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ “ rock 'n roll” အသွင်အပြင်သည်အလှည့်အနေဖြင့် Art Deco ၏ခေတ်သစ်နည်းဖြင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည်။
US Protagonists မှ Sylva & Cie Bonhams ၏ပုံရိပ်ယဉ်ကျေး။
ငါလိုက်နာပါပြီ Suzanne Kalan Instagram ကိုအချိန်အတော်အတန်ကြာနေပေမယ့်ဒီအုပ်စုထဲကသူမဟာရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအသစ်တစ်ခုကိုပြသခဲ့သည်။ Suzanne Kalandjian နှင့်သူမ၏သမီး Patile တို့နှစ် ဦး စလုံးသည်သူတို့၏“ မီးရှူးမီးပန်းများ” စုဆောင်းခြင်းကြောင့်လူသိများသည်။ ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကုန်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးမှာရိုးရိုးရတနာ၌ပြန့်ကျဲနေသော၊ တစ် ဦး ကတောက်ပခြင်းနှင့်သဟဇာတပရမ်းပတာ။
Suzanne Kalan ၏ခမ်းနားထည်ဝါသည့်လန်ဒန်အပြာရောင် Topaz လက်စွပ်ကိုသူမအားလက်မှတ်ထိုးထားသော baguette စိန်များနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည်။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် (ဂ) jewellerythroughtime.com
Suzanne Kalan မှအသစ်စက်စက်မီးရှူးကွင်းကို US Protagonists တွင်ပြသခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် (ဂ) jewellerythroughtime.com
ဘုရားကျောင်းစိန့် Clair လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၃၀ ကျော်ကတည်းကရွှေနှင့်အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာများ၌တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုသူအလွန်နှစ်သက်သည်။ St Clair သည်သူမ၏ကုမ္ပဏီကိုအီတလီနိုင်ငံ၊ Florence တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးရာစုနှစ်များစွာကြာမြင့်ခဲ့သော Florentine ရတနာ Guild - ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရွှေပန်းထိမ်များနှင့်လက်တွဲခဲ့သည်။
“ ရွှေပန်းထိမ်သမားတွေအသုံးပြုတဲ့ရှေးဟောင်းဓလေ့တွေကိုကျွန်တော်အရမ်းလေးစားတယ်။ နည်းစနစ်များနှင့်ကိရိယာများကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်သူတို့သမိုင်းကြောင်း၏အလေးချိန်နှင့်အတူလုပ်သောအရာဝတ္ထုတစ်ခုလုံးကိုပြည့်နှက်စေသည်။
Barneys New York သည်သူတို့၏ရတနာရတနာဌာနကို St. Clair ၏ပထမဆုံးစုဆောင်းမှုကို ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Temple St. Clair သည် GEM ဆုကိုရတနာလုပ်ငန်း၏ဂုဏ်အသရေဆုံးသော Jewelery Design အတွက်ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။
US Protagonists ရှိ Temple St. Clair ။ Bonhams ၏ပုံရိပ်ယဉ်ကျေး။
သူတို့တီထွင်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမအံ့သြစေနိုင်တဲ့ပါရမီရှင်အနုပညာရှင်တွေရဲ့တကယ့်ကိုပြောင်မြောက်လှတဲ့တေးဂီတအဖွဲ့။ လာမယ့်အမေရိကန်ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ရပ်သည်အထိ။ CC
ပို့သည် ဂလော်ဒီယာ Carletti, အချိန်မှတဆင့်ရတနာ။ Vogue Gioiello အားဒီဇိုင်းဆွဲသူများ၏ profile များကို၎င်း၊ ပွဲတွင်ရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံများအတွက် Bonhams ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။
Tags:#AlexSoldier • #genius ပါ • #HeidiGardner • #အိမ်များ • #KBrunini • #SuzanneKalan • #SylvaCie • #TempleStClair • #အမေရိကန်ကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ်များ • #VogueGioiello • အလက်ဇန်းဒါး • အတတ်ပညာ • Bonhams • တီထွင်ဖန်တီးမှု • အဖြစ်အပျက် • ဟဲဟဲ • ဟဲလို • စိတ်ဝင်စားခြင်း • ကျောက်စိမ်း • နယူးယောက်
မှတ်ချက်0ခုUS Protagonists event - ရတနာများအသည်းအသန်မြင့်တက်လာခြင်း"